Ọnụ Ụzọ Ntugharị Ezigbo Ntugharị China Manufacturers & Suppliers & Factory
Ọnụ Ụzọ Ntugharị Ezigbo Ntugharị - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 24 Ngwaahịa maka Ọnụ Ụzọ Ntugharị Ezigbo Ntugharị)
Eletriki Nanị Ụlọ Ahịa Ndagharị Na-agbaji Abụọ
Inye Ike: 600 sets/month
Akpaaka Epeepe Nanị Ọnụ Ụzọ Ntugharị Na-agbagha Ọnụ ụzọ a na-agbaghasị na-emekarị nke igwe anaghị acha. Ejiri nke a na-eme ihe dị n'elu ọnụ ụzọ ahụ, ọnụ ụzọ ahụ makwara mma n'ịdị na-edozi ya, ọ dị mma ma dị mma; na ogologo ogologo ụkwụ a na-ejide, nke na-eme ka ọhụụ na ahụ nwere akụkụ nwere ngwugwu. Ugbo ala...
Ọnụ ọnụ ahịa ụlọ ọrụ zipa dị elu
Onwe-ndozigharị Nnukwu Oke Ọgba nke Anya Azụmaahịa ọ bụla ị na-aga, Ebe ọ bụla ị na-achọ ịbanye, PVC Zipper Door (ọnụ ụzọ na-arụzi onwe ya, ọnụ ụzọ mgbake onwe gị, ọnụ ụzọ mgbake onwe gị) na-anọ n'akụkụ gị mgbe niile. Ma eleghị anya, ị gaghị achọpụta ịdị adị ya ma ọlị, Mana anyị ga-ekwenye zipu elu na-agba ọsọ...
Ọnụ ụzọ ụlọ dị elu nke na - emeghe ngwa ngwa
Nchịkọta Ọsọ Ọsọ nke PVC Na-achọ ụfọdụ ọnụ ụzọ ngwa ngwa PVC dị elu? Anyị nwere ọtụtụ ụdị dị iche iche na ngwaahịa, ọnụ ụzọ ọsọ ọsọ nwere ike ịhazi ya ma ọ bụrụ na ị nwere ụfọdụ mmebe. Ọnụ ụzọ dị elu maka ime ụlọ oyi bụ usoro ụzọ, nke a na-ejikarị na ngwa ụlọ ọrụ mmepụta ihe. Ha bụ nkwalite ọrụaka nke ụzọ amaara ama...
Ngwa ngwa Aluminium bugoro n'Ọnụ
Nchịkọta Ọsọ Ọsọ nke PVC N'agbanyeghị ebe ị nọ, will ga-ahụ ọnụ ụzọ dị elu, ọnụ ụzọ PVC na-etinyere n'ọtụtụ mpaghara ma nwee ọtụtụ uru ma e jiri ya tụnyere ọnụ ụzọ ụlọ ọrụ nkịtị. Ọnụ ụzọ dị elu maka ime ụlọ oyi bụ usoro ụzọ, nke a na-ejikarị na ngwa ụlọ ọrụ mmepụta ihe. Ha bụ nkwalite ọrụaka nke ụzọ amaara ama...
Ọnụ ụzọ dị elu nke Servo High Transor
Nchịkọta Ọsọ Ọsọ nke PVC PVzọ a na-ahụ elu nke PVC nke na-ahụ ụzọ dịtụ iche na nke ndị nkịtị, Mkpirisi nwere ike ịbụ 1.2mm, Mgbe ịchọrọ ọnụ ụzọ ngwa ngwa, Naanị nwee ike ịbịakwute anyị! Ọnụ ụzọ dị elu maka ime ụlọ oyi bụ usoro ụzọ, nke a na-ejikarị na ngwa ụlọ ọrụ mmepụta ihe. Ha bụ nkwalite ọrụaka nke ụzọ amaara ama...
Ọnụ ụzọ ọrụ eji arụ ọrụ na arụmọrụ kachasị elu
Nchịkọta Ọsọ Ọsọ nke PVC HongFa bụ ụlọ ọrụ akọwapụtara na ọnụ ụzọ akpaghị aka, Ihe nlereanya a - PVC akwa ọsọ whic agbaala puku kwuru puku. Ejiri akwa akwa ọsọ nke PVC bụ akwa, aluminium, igwe anaghị agba nchara… Ọnụ ụzọ dị elu maka ime ụlọ oyi bụ usoro ụzọ, nke a na-ejikarị na ngwa ụlọ ọrụ mmepụta ihe. Ha bụ nkwalite...
Ọnụ ụzọ dị elu na windo transperent
Nchịkọta Ọsọ Ọsọ nke PVC Anyị bi n’ụwa nke jupụtara ibo ụzọ, Anyị na-emeghe ọnụ ụzọ kwa ụbọchị, mana ị na-ahụ ọnụ ụzọ na-agba ọsọ ọsọ karịa ọnụ ụzọ ọsọ PVC dị elu? Ejiri akwa akwa ọsọ nke PVC bụ akwa, aluminium, igwe anaghị agba nchara… Ọnụ ụzọ dị elu maka ime ụlọ oyi bụ usoro ụzọ, nke a na-ejikarị na ngwa ụlọ ọrụ...
Akpanaka Akụrụngwa Turbine siri ike Rolling Shutter n'Ọnụ Ụzọ
Akpanaka Akụrụngwa Turbine siri ike Rolling Shutter n'Ọnụ Ụzọ A na-akpọkwa ụzọ ngwa ngwa ọnụ ụzọ dịka aluminum alloy ngwa ngwa, na-ezo aka dị ka ndị na-ekpuchi windo. Ọ bụ ụdị ọhụrụ nke ọnụ ụzọ ngwa ngwa nke nwere mgbochi na ịchọta oke okpomọkụ. Ọ nwere ike ịtụkwasị obi, dị irè ma dị mfe ịrụ ọrụ. N'iji usoro...
PC Transparent Commercial Crystal Rolling Shutter n'Ọnụ Ụzọ
PC Transparent Commercial Crystal Rolling Shutter n'Ọnụ Ụzọ Ọnụ ụzọ mpempe akwụkwọ na-ekpuchi kristal nwere ọtụtụ narị ọnụ ụzọ pc nke na-agafe ígwè ígwè. O nwere uru nke nghọta, mgbochi, mgbochi mmiri ozuzo, ájá na ájá. A na-ejikarị ọnụ ụzọ kpuchiri ọnụ ụzọ kpuchie ọnụ ahịa na nnukwu ụlọ ahịa. Ha dịkwa mma maka...
PVC ngwa ngwa Nwee Mgbidi Roller Shutter n'Ọnụ Ụzọ
PVC ngwa ngwa Nwee Mgbidi Roller Shutter n'Ọnụ Ụzọ Ọfịs Rapid Roller Shutter Stacking Door , bụ usoro Shenzhen Hongfa Automatic Door Company, nke a na-emepụta nke ọma, nyere ya ọrụ dị iche iche na-eme ka ọ dịkwuo ọkụ, na-egbochi ụmụ ahụhụ, windproof, anti-dust, soundproof, anti-fire, anti-smell and natual ọkụ ọkụ,...
Ahịa Ụlọ Ahịa Azụmahịa Crystal Rolling Shutter Ụzọ
Ahịa Ụlọ Ahịa Azụmahịa Crystal Rolling Shutter Ụzọ Atụmatụ: (Crystal ala ụzọ & Ụlọ ahịa ala ụzọ) - Akara nke kachasị - ngosi nwere ike ịhụ mgbe ụlọ ahịa na-emechi --Ndị nchekwa - iji daa mmeghe ọ bụla n'ụzọ zuru oke - A na-eji ígwè ọrụ rụọ ọrụ maka ngwa ngwa ngwa ngwa ma kwatuo ọrụ. Mgbochi kpọmkwem kpọmkwem -...
PVC Ọnụ Ụzọ Ntugharị Ntugharị Ntugharị
PVC Ọnụ Ụzọ Ntugharị Ntugharị Ntugharị High Speed Door Grey, Yellow grid, Purple, Green, Light green, Black, Perforated Yellow grid, White, Blue, White grid, Sky Blue, Yellow, Orange, Red Color curtain: 0.8 mm thickness. Transparent curtain: 1.2
Ọnụ Ụzọ Ntugharị Ezigbo Ntugharị PVC Ọnụ Ụzọ Ntugharị Ntugharị Ntugharị Ọnụ Ụzọ Ntugharị Mgbanaka Ọnụ Ụzọ Ntugharị Agbanwe Agbanwe Ọnụ ụzọ eji agagharị agagharị Ọnụ Ụzọ Ámá Ntugharị Ọnụ Ụzọ Ntugharị Mgbidi Mgbidi Elu Ọnụ Ụzọ Ntugharị Ngwá Ọrụ Eletrik